Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. Norway: Bandhig-faneedka "Geeska Afrika" ( East African Festival) oo ka dhici doona Magaalada Oslo.
Posted by Ogadentoday-Chief Editor on August 19 2012 10:06:39
Waa Bandhig-faneedkii sanadkii hore OYSU soo Bandhigtay:
Norway: Bandhig-faneedka "Geeska Afrika" ( East African Festival) oo ka dhici doona Magaalada Oslo.
Oslo- Waxaa si xawli ah ku socda diyaar garowga loogu jiro qabashadda bandhig-faneedka Geeska Afrika ( East Africa Festival), oo sanadkan la qaban doono 25-Augst-2012 la qabto mar. Qaban-qaabiyayaasha bandhig-faneedka "East Africa Festival" oo ka dhici doona badhtamaha magaaladda Oslo, gaar ahaan meesha lagu magacaabo Gr�nland, ayaa lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro dhaqameedyo isugu jira Dhaantadda, labis dhaqameedka Soomaaliyeed iyo heeso toos looga qaadi doono masraxa oo ah mid u furan dhamaan dadweynaha.
East Africa Festival, oo ah kan ugu weyn ee ay qabtaan dadyowga kasoo jeeda geeska Afrika ee ku nool dalka Norway, ayaa waxaa qaban-qaabiya munaasabadan sanad walba Ururka Dhalinyaradda iyo Ardayda Ogadenia ee OYSU.
Waxaana laga codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Magaaladda Oslo iyo nawaaxigeeda inay ka soo qeyb-galaan bandhig faneedkan oo dhici doona 25- Augst-2012.